Isithombe booth. Isithonjana sezithombe otholwa ngogesi noma
ⓘ Isithombe booth. Isithonjana sezithombe otholwa ngogesi noma i-kiosk yesimanje ngekhamera ne-processor yefilimu. Namuhla, iningi lamadokodo wezithombe ledijitha ..
ⓘ Isithombe booth
Isithonjana sezithombe otholwa ngogesi noma i-kiosk yesimanje ngekhamera ne-processor yefilimu. Namuhla, iningi lamadokodo wezithombe ledijithali
Ilungelo lokuqala lokuqanjwa kwamakhamera lafakwa ngo-1888 nguWilliam Pope noBaltimore Edward Poole. Umshini wokuqala wokuthwebula owasebenza ngempela wawungumkhiqizi womqambi waseFrance u-TE Enjalbert Mashi 1889. Kwakhonjiswa kwi-1889 Worlds Fair eParis. Umthwebuli wezithombe waseJalimane uMathew Steffens wafaka isicelo selungelo lobunikazi ngomshini onjalo ngoMeyi 1889. Le mishini yokuqala yayingathembekile ngokwanele ukuba ikwazi ukuzimela. Ikhamera yokuqala ezenzakalelayo ephumelele kwezentengiso yayingu "Bosco" enelungelo lobunikazi ngoJulayi 16, 1890 ngumqambi uConrad Bernitt eHamburg. Yonke le mishini yokuqala yakhiqiza ama-ferrotypes. I-automation yokuqala enenqubo engemihle neqondile yasungulwa nguCarl Sasse 1896.
Umqondo wesimanje wesithombe sobumbano owatholwa u-Anatol Josepho, owafika eRussia evela eRussia ngo-1923, wayenekhethini. Indawo yokuqala yezithombe yavela eBroadway eNew York ngo-1925. Kwamasenti angama-25, ikhabethe lalithatha izithombe eziyi-8, lazithuthukisa futhi laziprinta, kwathatha imizuzu eyi-10. Isetshenziswe ngabantu abangama-280.000 ezinyangeni eziyisithupha zokuqala ngemuva kokuba kuvulwe ikhabethe. Kwasungulwa i-Photomaton Company ukuhlalisa amakhabethe ezweni lonke. NgoMashi 27, 1927, uJosepho wakhokha ama- dollar ayizigidi eziyinkulungwane futhi waqinisekisa amalungelo okushicilela asazowathola.
2. Amaphothi Wezithombe Zepasipoti
Amadokodo amaningi wesithombe asetshenziselwa ubunikazi bezithombe. Bangumshini wemali osebenza nge-othomathikhi enzelwe ukuphrinta izithombe ngefomethi ethile ehlangabezana nezidingo zesithombe sepasipoti. Amakhophi amaningi angaphrintwa ukuze asindise abasebenzisi ukuze bawasebenzise ngokuzayo.
Ngokwesiko, amadokodo ezithombe anesihlalo noma ibhentshi, lapho kuzohlala khona umphathi oyedwa noma ababili abathwebuliwe. Ngokuvamile isihlalo sizungezwe ikhethini ukuvumela ubumfihlo futhi uvimbele ukuphazanyiswa kwangaphandle ngesikhathi somhlangano wesithombe. Ngemuva kokukhokha, isithabathaba sezithombe sithatha uchungechunge lwezithombe, kepha iningi lamadokodo wanamuhla lingathatha isithombe esisodwa liphrinte uchungechunge lwezithombe ezifanayo.
3. Photo Tag Booths
Ama-tags wezithombe ezenziwe ngeJapan noma imishini yokuphrinta yezithombe iyindawo ekhethekile yezithombe ekhiqiza izitika zezithombe. Ngenkathi iJapan isaduma kakhulu, basakazekela eTaiwan, eSouth Korea, eHong Kong, eSingapore, eMalaysia, Philippines, China, Vietnam naseThailand e-Asia. Bangeniswa nase-Australia. Abanye bebeqala ukuvela e-USA naseCanada, yize kungashiyanga lutho e-Europe ngenkathi kwethulwa maphakathi nawo-1990s.
EJapan, i-purikura プ リ ク ラ ibhekisa kummephu wethegi wesithombe noma womkhiqizo wesithombe. Imishini yePurikura yasungulwa ukuphendula intshisekelo yabesifazane abasebancane ezithombeni nakwizitika.
Wikipedia: Isithombe booth